Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Manohy ny sidina mankany Frantsa sy ny Repoblika Tseky i Russia
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Tseky • Vaovao farany Brezila • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fanapaha-kevitra hanohy ny sidina miaraka amin'ireo firenena ireo dia toa fombafomba fotsiny ihany, satria tsy nisy fiaramanidina nanambara ny fikasana hanohy ny sidina mivantana voalahatra eo amin'ny Federasiona Rosiana, Frantsa ary ny Repoblika Czech.
Serivisy fiaramanidina Russia avy any Mosko sy St. Petersburg ka hatrany Paris sy Nice.
Mamerina ny sidina ao Moskoa mankany Prague i Russia.
Mandrak'androany dia nandefa serivisy fiaramanidina miaraka amin'ny firenena 48 i Russia.
Nanambara i Russia fa hiverina ny sidina ofisialy miaraka amin'i Frantsa sy ny Repoblika Czech manomboka ny asabotsy 24 jolay.
Seranam-piaramanidina frantsay sy rosiana, toa ny Air France, Aeroflot ary ny hafa, dia afaka miasa sidina efatra isan-kerinandro eo anelanelan'ny Moskoa sy Paris sy Moskoa ary Nice. Hisy sidina roa isan-kerinandro eo anelanelan'ny St. Petersburg sy ireo tanàna frantsay ireo.
Mpitondra tseky sy rosiana, toy ny Czech Airlines ary Aeroflot dia afaka manohy ny sidina miasa eo anelanelan'ny Moskoa, Rosia ary Prague, Repoblika Tseky.
Saingy, amin'izao fotoana izao, ny fanapahan-kevitra hanohy ny sidina miaraka amin'ireo firenena ireo dia toa fombafomba fotsiny ihany, satria tsy nisy fiaramanidina nanambara ny fikasana hanohy ny sidina mivantana voalahatra eo amin'ny Federasiona Rosiana, Frantsa ary ny Repoblika Czech.
Nanambara ihany koa ny tompon'andraikitra rosiana fa hanitatra ny fandaharanasa momba ny sidina mahazatra mankany Austria, Greece, Belzika, Hongria, Bulgaria, Kroasia, Etiopia ary Libanona manomboka ny 24 jolay.
Hatramin'izao, ny Federasiona Rosiana dia nanohy ny fifamoivoizana tamin'ny rivotra 48 fanjakana.